Qoyska boqortooyada oo safar ku jooga dalka Faransiiska - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Qoyska boqortooyada oo safar ku jooga dalka Faransiiska
La daabacay tisdag 2 december 2014 kl 11.40
Boqorka dalka Iswiidhen Carl XVI Gustaf oo ey la socoto boqoradda dalka Iswiidhen Silvia ayaa booqasho rasmi ah ku tagey dalka Faransiiska caasimaddiisa Baariis, iyada oo ey la socdaan saraakiil ka socota 25 shirkadood oo laga leeyahay dalkan Iswiidhen iyo sidii ey ula sameeysan lahaayeen xiriir dhaqaale.
Sidoo kale waxaa qoyska boqortooyada ku weheliya safarkan wasiiradda suuqa shaqada Ylva Johansson (S), wasiirka manaafacaadka Mikael Damberg (S) iyo wasiirka tamarta Ibrahim Baylan (S) iyo sidoo kale Jacob Wallenberg, ahna madaxa daarta baayac-mushtarka Investor, iyo Leif Johansson, ahna hoggaamiyaha shirkadaha Ericsson iyo Astra Zeneca. Waxaa sidoo kale kullamada ka qayb qaadan doona kullammada Ylva Berg, ahna agaasimaha guud ee baayacmushtarka, ahna urur u xil-saaran sidii shirkadaha Iswiidhen loogu kobcin lahaa caalamka.
Wafdiga uu hoggaamineyo boqorka Iswiidhen ayaa illaa iminka waxaa loo diyaariyey kulammo uu la yeelan doono xubnaha baarlamanka Faransiiska, ururka
Fondation PSG (Paris Saint Germain), iyo sidoo kale iskuulka Iswiidhen.
Kulanka uu boqorku la yeelan doono PSG fondation, kana dhici doona xarunta garoonka Parc de Princes ee magaalada Baariis ayuu ka soo qayb geli doonaa cayaartooyga iswiidhen Zlatan Ibrahimovic, sida uu qeexay madaxa saxaafadda ee safaaradda Iswiidhen ku leedahay dalka Faransiiska oo la hadlay war-geeyska Aftonbladet.